Xildhibaano ka tirsan Xisbiga UPD oo shir Qarsoodi ah la Yeeshey Fahad Yasin - Awdinle Online
Xildhibaano ka tirsan Xisbiga UPD oo shir Qarsoodi ah la Yeeshey Fahad Yasin
October 28, 2019 (AO) – Warar dheeri ah ayaa kasoo baxaysa kulan magaalada Muqdisho ku dhex-maray xildhibaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya, iyo agaasimaha hay’adda Nabad-Sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin.
Xildhibaanada la kulmay Fahad, ayaa u badnaa kuwa kasoo jeeda Galmudug, kana tirsan xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo Madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulankan, ayaa sida ay noo xaqiijiyeen xildhibaanada ka qeyb-galay qaarkood waxaa looga hadlay arrimaha Galmudug iyo sidii xal buuxa looga gaari lahaa xili ay jirto cabsi laga qabo in isku dhacyo u dhaxeeya dowladda iyo Ahlu-Sunna ay ka dhacaan Dhuusomareeb.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegey in Fahad laga codsadey kulankan, xildhibaanada ayaa daneynaayey in Galmudug aysan ka dhicin rabshado dhiig uu ku daato, waxayna xildhibaanada ka codsadeen inay kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa wax walba oo lagu baajin karo gacan ka hadal.
Xildhibaanadda qaar ayaa sidoo kale sheegay in kulanka looga hadlay sidii dowladda iyo xildhibaanada golaha shacabka ee Galmudug ay heshiis siyaasadeed uga gaari lahaayeen arrinta Galmugud oo caqabad weyn ku noqotay dowladda iyo geedi socodkeeda.
Si kastaba, xildhibaanada ayaa sheegay inay ballan-qaadeen inay ka shaqeeyaan amniga iyo in laga hortago dhibaato ka dhacda Galmudug, hase yeeshee waxay diideen inay heshiis siyaasadeed ka galaan Galmudug, isla markaana ay doonayaan in doorasho lagu kala baxo.
Xildhibaanada la hadlay Awdinle Online ee ka qeyb-galay kulanka ayaa xaqiijiyey in aysan jirin wararka sheegaya in kulanka looga hadlay sidii xisbiga UPD u ogolaan lahaa in muddo laba sano ah xilka loogu kordhiyo Madaxweyne Farmaajo.
“Marnaba mudo kororsi iyo wax ka saabsan hoggaanka dalka loogama hadal kulanka. Wuxuu ahaa kulan 100% diiradda lagu saaray arrimaha Galmudug.” ayuu yiri xildhibaan la hadlay Caasimada Online.
Previous articleGolaha Amaanka Qaramadda Midoobey oo u Goodisey Dowladda Soomaaliya
Next articleFARMAAJO OO KU BAAQAY IN GURMAD DEG-DEG AH LOO FIDIYO DADKII SAAMEYNTA KU YEESHAY FATAHAADAHA:- (Sawiro)